Shiinaha Iskudhaca Soosaarayaasha Sibiliyaha Soo Saaraha iyo Alaab-qeybiye | Dinglong
Silica Fused waa ciid quartz nadiif ah oo saafi ah oo dhalaalay si loo sameeyo galaas iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada isku dhafka ah. Silicaheena la isku shubay waa shey aad u dahaadha insulinta oo leh kuleyl aad u hooseeya, adkeysi koronto oo sareeya iyo adkeysi heerkul sareeya.
Fasalka A (SiO2> 99.98%)
Fasalka B (SiO2> 99.95%)
Fasalka C (SiO2> 99.90%)
Fasalka D (SiO2> 99.5%)
Codsiyada: Refractories, Elektarooniga, Macdanta
Nadiif sare iyo heerkul jilicsan
Adkaysiga sare ee korantada iyo kuleylka kuleylka oo hooseeya
Hufnaan sare oo ka timaadda ultraviolet-ka illaa heerka 'infrared spectral range'
Sameynta silica la isku daray: Fusion koronto
Dinglong wuxuu soosaarayay silica la isku daray miisaanka warshadaha iyadoo la adeegsanayo habka dhalaalida korontada. Si gaar ah si gaar ah, Dinglong wuxuu adeegsadaa habka isku-darka dufcadda ee isugeynta korantada. Habka isku dhafka Dufcadda, tiro badan oo walxo cayriin ah ayaa la dhigayaa gudaha qolka faakiyuumka qashinka lagu buuxiyo oo sidoo kale ku jira waxyaabo kululeyn ah. In kasta oo qaabkan taariikh ahaan loo isticmaalay in lagu soo saaro hal-bawlo waaweyn oo walxaha ka mid ah, haddana sidoo kale waa la waafajin karaa si loo soo saaro qaabab aad u yar, oo u dhow shabakadda.
Ka shaqeynta Silica Fused: Farsamaynta farsamada
Adkaanta awgeed, silica la isku daray wuxuu u baahan yahay aalado dheeman si farsamo ahaan loogu farsameeyo. Sababtoo ah waa jajaban tahay, waxaa jira xad u leh awoodda uu u adkeysan karo ka hor inta uusan dillaacin oo ka dhasha in xawaaraha quudinta inta lagu jiro howsha loo baahan yahay in si taxaddar leh loo xusho.
Ku saabsan Qalabka Dinglong Quartz
Qalabkan silica ee la isku daray waxaa lagu soo saaray xarun la xaqiijiyay oo ku taal Lianyungang, Shiinaha. Muddo 30 sano ah oo la aasaasayey, Dinglong wuxuu kasbaday taageero farsamo iyo farsamo oo xoog leh iyo khibrado aad u tiro badan oo lagu soo ururiyey soosaarida agab quartz ah Hawlaheena wax soo saar waxaa loo habeeyay isku waafaqsanaanta iyo isku halaynta - caawinta hubinta tayada iyo qiimaha wax soo saarka la isku halleyn karo. Waxaan aaminsanahay in alaabooyinka la isku halleyn karo ay naga caawin karaan helitaanka iibinta hoggaaminta iyo dhisidda kalsoonida iyo saaxiibtinimada macaamiisheenna.
Hore: Bur Silica Fused
Xiga: Silica Fused for Warshadaha elektaroniga
Shiinaha Fused Silica
Soosaaraha Shirkada Shiinaha ee Silica
Maaddooyinka Silica ee isku dhafan
Shirkada Iskuxira Silica